Naqshadeynta Calaamadaha "Automated Content" oo ah Qodobbada Isku-dhajinta si loo fududeeyo shaqadaada
Maqnaanshaha mawduucku waa ficil ah in laga soo saaro macluumaad faa'iido leh oo ka socda internetka oo ku daabacan website-ka. Cilmi-baarayaal iyo qoraallo kala duwan ayaa qoraallo ka helaya blogyada la aasaasay iyo shabakadaha si ay u koraan ganacsigooda. Shirkadaha, barnaamijyada, iyo kuwa horumariya webka waxay sidoo kale isticmaalaan waraaqo kala duwan websaydh naqshadeyn ama ka kooban waxyaabo macdan qodaya si ay u helaan shaqadooda. Qodobbada ugu muhiimsan ee xoqidda mawduucyada hoos ku qoran.
1: DOM Kalasooc
DOM ama Document Object Model waxay qeexaysaa qaabka iyo qaabka content ee faylasha HTML iyo XML. DOM cirifka waxaa isticmaala barnaamijyada iyo horumariyeyaasha si loo helo aragtiyo qotodheer oo ku saabsan boggaga internetka ee kala duwan. Waxaad isticmaali kartaa DOM parser si aad uga soo saarto mawduuca sahlan. XPath waa qalab dhamaystiran oo lagu xoqayo boggaga internetka iyo blogs-ka, waana mid ku habboon Mozilla, Internet Explorer iyo Google Chrome. Iyada oo XPath, waxaad xoqin kartaa qaybta guud ama qayb ahaan iyada oo aan loo baahnayn xirfadaha barnaamijka.
2: HTML Isku-darka
3: Isku xirxir qoto-dheer
. Waxay bartilmaameedsanayaan miisaska kala duwan iyo liisaska isla markaana soo uruuriyaan waxyaabo macno leh marka la eego shuruudahooda. Qaar ka mid ah waxay ku tiirsan yihiin Kimono Labs iyo qalab kale oo la mid ah si ay shaqadooda u gutaan. Farsamadani waxay kuu keeni doontaa faa'iido kaliya haddii aad isticmaasho tiro yaryar iyo qoryo, iyo tayada content waxay cabbiraan wax ku oolnimada bumbooyinkan iyo guutooyinka.
Google-ka wax lagu daabaco ayaa loo adeegsadaa adeegga waxtarka leh. Farsamadani waxay caan ku tahay warshadaha. Laga soo bilaabo Google Docs, waxaad soo saari kartaa faylasha la rabay oo aad u soo jiidatid sida shuruudahaaga. Ka sokow, waxaad si joogto ah u baari kartaa oo u ilaalin kartaa tayada content marka la xoqayo.
XPath ama XML Luqadda XML waa luqad weydiin ah oo ka shaqeeya dukumentiyada HTML iyo XML. Maadaama dukumiintiyadani ay ku saleysan yihiin qaabdhismeedka geedka, XPath waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhex mariyo bogagga internetka ee la soo xulay waxayna kaa caawineysaa inaad hubiso tayada. Waxay ku siinaysaa faa'iidooyin badan oo ay ku helaan webmasiga ah ee isku-xirnaanta HTML iyo DOM-ka, iyo waxyaabaha la soo saari karo bogga internetka ee isla markiiba.
6: Iskuduwaha Qaababka Qoraalka
Waa farsamo-is-waydaarsi loo adeegsado horumariyeyaasha iyo barnaamijyada iyo naadiga luuqadaha sida Ruby, Python, iyo Perl. Waxaad hirgelin kartaa nidaamkan xoqitaanka si aad u xoqdo tiro badan oo bogag ah si buuxda ama qayb ahaan.
Dhamaan farsamada buqcad-xoqidda waxay hubiyaan natiijooyin tayo leh, waxaana jira qalab sida cURL, HTTrack, Node. js iyo Wget oo loo sameeyay si loo fududeeyo shaqadaada. Waxaad soo saari kartaa inta badan ama meelo yar sida aad rabto Source .